पत्रकारिता र प्रतिबद्धता - Khoj Sanchar
साँचो जीवननिर्माण अभियान
खोज सञ्चार भिडियो
पत्रकारिता र प्रतिबद्धता
समाजको परिवर्तनसँग पत्रकारिताको पनि परिवर्तित परम्परा निर्माण भएको छ । उद्देश्य र मान्यता उही भए पनि सामाजिक परिवर्तन र विज्ञान प्रविधिका विकासले पत्रकारिताका स्वरूप र माध्यममा पनि क्रमिक परिवर्तन भएको छ ।
पत्रकारिता समाजको एक अभिन्न अङ्ग हो । यो सत्य तथ्यसँग जोडिएको हुन्छ । यसको उद्देश्य सन्तुलित तथ्यको प्रस्तुति हो । सन्तुलित र सकारात्मक तथ्यलाई समाजसँग जोड्दा नै समाजमा सकारात्मक परिवर्तन देखिन्छ । पत्रकारिता सामाजिक पहरेदारीको आधार होे । समाजमा भएका अन्याय, अत्याचार, अपराध, आदिका विपक्षमा रहने र न्यायपूर्ण समतामूलक समाजका पक्षमा पत्रकारिताको उद्देश्य जोडिएको हुन्छ । सत्यलाई नजिकबाट उदिनेर यथाशक्य चाँडो समाजको जानकारीमा पु¥याउनु पत्रकार र पत्रकारिताको प्रतिबद्ध आवाजका साथै उद्देश्य पनि हो ।
समाज र सञ्चारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहन्छ । पत्रकारितालाई समाज रूपान्तरणको माध्यम मानिन्छ । समुन्नत समाजका निर्माणमा यो एक आधार हो । समाजमा भएका घटनाको यथार्थ बोधमा स्वच्छ पत्रकारिताको अहम् भूमिका हुन्छ । यसर्थ यसलाई अनिर्वाचित संसद, तेस्रो आँखा, शक्तिशाली प्रतिपक्ष पनि भनिएको पाइन्छ । यो राज्ययको चौथो अङ्ग पनि हो । यी सबै मान्यताका पृष्ठभूमिमा समाजसँग यसको भूमिका नै प्रमुख पक्ष हो भन्ने देखिन्छ । हिजोदेखि समाजसँग जसरी अभिन्न रूपमा पत्रकारितालाई लिइएको छ त्यसरी नै आजको समाजको दर्पणका रूपमा पत्रकारिताको गरिमा बोध हुन जरुरी छ । सैद्धान्तिक पक्षको प्रायोगिक आधार व्यवहार हो । यसलाई व्यवहारका कसीमा जोख्दा र घोट्दा नै समाजसँग अभिन्न आधार निर्माण हुन्छ ।
समाजको परिवर्तनसँग पत्रकारिताको पनि परिवर्तित परम्परा निर्माण भएको छ । उद्देश्य र मान्यता उही भए पनि सामाजिक परिवर्तन र विज्ञान प्रविधिका विकासले पत्रकारिताका स्वरूप र माध्यममा पनि क्रमिक परिवर्तन भएको छ । हिजोको आखेटक युगमा दिने गरेको सूचना नै समाचारको आधार हो । यो आधार हस्तलिखित पत्रकारितामा आउँदा नयाँ पाइलो या फटको बनेको यथार्थ बिर्सन मिल्दैन । यस्तै छापामा घटनाको प्रस्तुति क्रान्तिकारी परिवर्तन नै मान्न सकिन्छ । प्रविधिको विकाससँगै रेडियो, टेलिभिजनसँग यो नयाँ माध्यमको नयाँ आधार भएर विकसित भएको पक्ष पनि स्मरणीय नै छ । कम्प्युटरको विकाससँगै पत्रकारिता साइबर युगको नयाँ माध्यम बनेको छ । साइबर स्पेसमा नै यसको भूमिका आजको नयाँ आधार भएर लेखिएको छ । आजको अनलाइन पत्रकारिताको प्रतिस्पर्धामा सायबर स्पेस र भर्चुअल मूल्य उल्लेख्य छ ।
अहिलेको समाज प्रविधिमैत्री र सञ्चारकेन्द्री बनेको छ। अहिलेको पुस्ता प्रविधिको नवीनतासँग हुर्किरहेको अवस्थामा सूचनाको त्यस किसिमको पहुँचका खोजीमा पनि रहेको छ । आजभोलि समाजका हरेक घटना डिजिटल संस्करणमा नै सुलभ बनेको पाइन्छ । यसैलाई आत्मसात् गरी नेपाली डिजिटल पत्रिका खोज सञ्चार को प्रकाशन आरम्भ गरिएको हो । खोज सञ्चार सूचना विभागमा दर्ता नं १७०५-२०७६/७७ दर्ता गरी प्रकाशन सुरु गरिएको डिजिटल पत्रिका हो । खोज सञ्चार पत्रिकामा जीवनशैलीलाई प्राथमिकता दिई यसै विषयमा केन्द्रित भई हालसम्मको यात्रा अघि बढेको हो । स्वस्थ जीवनशैली र पूर्वीय दर्शनका खोजमूलक चिनारीमा खोज सञ्चारको पहिचान बनिसकेको छ । यस पहिचानलाई कायम राख्दै अबका दिनमा यस डिजिटल पत्रिकामा समसामयिक सामाजिक मुद्धा र पहिचानको विषयलाई पनि थप प्राथमिकतामा राखी प्रकाशन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । राष्ट्रिय मुद्धा तथा यहाँका दर्शन, धर्म, शिक्षा, संस्कृति, अध्यात्म तथा यसका वैज्ञानिक पक्षको खोजीको विषय यस अनलाइन पत्रिकाको प्राथमिकतामा रहने छ । खोज सञ्चार तपाईका साथमा छ र तपाईले पनि खोज सञ्चारलाई साथी बनाउनु नै हुने छ । यसका लागि यहाँको अमूल्य सल्लाह, सुझाउ तथा सहयोगको अपेक्षासहित अबको यात्रा अघि बढाएका छौँ । यही नै हाम्रो प्रतिबद्धता हो ।
असारे गीतमा ननाचेको असार
सात्त्विक सोचले जन्माएको ‘श्रीकुञ्ज होमस्टे’
टिकापुर थरुहट थारुवान विद्रोहको ६ वर्ष
कोभिड लाग्दाको अनुभूति
आनन्दकुटी विद्यापीठमा मात्र रु १०० मा भर्ना गरी निशुल्क पढाई
प्राण शक्ति अर्थात् प्राणायाम
गैर न्यायिक सडक बिस्तार
द्रौपती अर्याल कानुनी सल्लाहकार
प्रज्ञा थैव सल्लाहकार
राकेश कायस्थ ब्यवस्थापक
विकास बाबु श्रेष्ठ
Khoj Sanchar August 22, 2021 August 22, 2021
Khoj Sanchar August 5, 2021 August 5, 2021
Khoj Sanchar July 5, 2021 July 5, 2021
कृषि र बजार
स्काई भिजन मेडिया प्रा.लि.
कुपण्डोल, ललितपूर महानगरपालिका, नेपाल
सुचना विभाग दर्ता नं.: १७०५/०७६-७७
98510 31277, 9813 904354
समकालीन समाज प्रबिधिक रूपमा एकदम सबल हुदै गइरहेको छ । यसलाई नेपाली समाजको लागी एक फड़को को रुपमा लीन सकिन्छ । बिश्वब्यापिकरण र आधुनिकीकरणको प्रमुख कारण बन्दै गरेको सामाजिक संजालले नेपाली समाजको संस्कृति लगायत बिभिन्न पक्षहरूमा नकारात्मक रुपमा असर गरेको महशूस भएता पनि यसले सकारात्मक रुपमा पनि प्रभाब पारेको पाईन्छ । खोज सञ्चारले हरेक सूचनालाइ स्वच्छ र गुणस्तरीय सम्प्रेशन गर्ने प्रतिज्ञा गर्दै स्वच्छ पत्रकारिताको बिकाश गर्ने कोशिस गर्दछ ।
Contact us: khojsanchar@gmail.com
@2020 - Khoj Sanchar. All Right Reserved. Designed and Developed by Yelko